Labada wiil ee Trump dhalay oo ku dhaleeceeyey hogaamiyeyaasha xisbiga Jamhuuriga in aanay si buuxda doorashada ugu taageerin aabahood. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Labada wiil ee Trump dhalay oo ku dhaleeceeyey hogaamiyeyaasha xisbiga Jamhuuriga in...
Labada wiil ee Trump dhalay oo ku dhaleeceeyey hogaamiyeyaasha xisbiga Jamhuuriga in aanay si buuxda doorashada ugu taageerin aabahood.
Labada wiil ee Trump dhalay ayaa ku dhaleeceeyey hogaamiyeyaasha xisbiga Jamhuuriga in aanay si buuxda doorashada ugu taageerin aabahood.
Labada wiil ka weyn oo la yidhaa Trump Jnr ayaa sheegay in xisbiga Jamhuurigu aanu mawqif fiican ka qaadan sidii uu madaxweynaha Maraykanku mar labaad ugu guulaysan lahaa madaxtinimada, halka walaalkii Eric na yidhi ” dadka noo codeeyey ilooobi maayaan sidaad noola dhaqanteen adhiyahow”.
Arintaas ayaa muujinaysa sida ay u kala fogaadeen Trump iyo xisbiga Jamhuuriga ah ee uu doorashada ugu tartamayey.
Waloow aan doorashadii la soo gabogabayn, ayaa hadana waxa muuqata in musharaxa Dimuqraadiga, Joe Biden, qarka u saaran yahay inuu tartanka ku guulaysto.
Trump ayaa wacad ku maray inuu garsoorka u gudbin doono dacwad uu ku doonayo in codadka la dhiibtay dib loo tiriyo, waxaanu sheegay in ay dhaceen “falal musuqmaasuq ahi” waana eed aanu wuxuu ku caddaynayo soo bandhigin.
Senator-ka magaca leh ee ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, Mit Romney, iyo badhsaaabka gobolka Marryland oo isna ka tirsan isla xisbigaas ayaa labuba ka digay in la carqaladeeyo hanaanka dimuqraadiga ah ee dalka.
Laakiin Trump Jnr oo la rumaysan yahay inuu leeyahay han siyaaseed ayaa qarsan kari waayey sida uu ugu cadhaysan yahay xubnaha xisbiga ee hungurigu ka hayo in ay u tartamaan doorashada 2024.
Waxaanu qoraal uu ku baahiyey boggiisa Twitter-ka ku yidhi “aamusnaanta xubnahaa hunguraynaya in ay u tartamaan doorashooyinka sannadka 2024 ayaa u qaadan waa nagu noqotay”.
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaa ku daray “Jamhuuriyiintu mawqifkoodu muddo tobanaan sano ah ba mid liita ayuu ahaa, waana sababta ay ugu suurto gashay siyaasiyiinta garabka bidix in ay helaan waxa maanta inoo muuqdaa.”
Walaalkii Eric ayaa isaguna waxa uu Twitter-ka bogga uu ku leeyahay ku qoray “aaway Jamhuuriyiintii? Maxay dagaalka lagaga hortagayo musuqmaasuqan uga qayb geli laayihiin? Dadka noo codeeyey [waxaad fasheen] iloobi maayaan adhi yahow”.
Dhanka kale labada wiil ee Trump dhalay waxay aad u amaaneen xubnaha Jamhuuriyiinta ah ee aabahood amaanay ee taageeray.
Afartii sannadood ee uu madaxweynaha ahaa, waxa u suurto gashay Trump inuu xisbiga Jamhuuriga ku dirqiyo in ay siyaasadihiisa taageeraan.
Laakiin loolanka ka dhexeeya Trump iyo hogaamiyeyaasha xisbiga Jamhuuriga ayaa dhaliyey su’aalo badan oo la iska waydiinayo sida uu noqon doono mawqifka xisbigu wixii madaxtinimada Trump ka dambeeya hadii laga guulaysto ama hadii uu guulaysto wixii ka dambeeya afarta sano ee la doorto.
Previous articleDagaalka Itoobiya ka qarxay Saameyn maku yeelan karaan Wadamada Geeska Afrika ?
Next articleWariyihii hore ee Telefishanka Dowladda Afgaanistaan iyo laba qof oo kale oo lagu dilay qarax bam oo ka dhacay Kabul
Dawladda Taiwan ayaa hawlgal farsamo ka bilawday Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland Talaadadii iyadoo diirada lagu saaray iskaashiga labada dhinac ee caafimaadka,...